China Skirting Board ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ ရွှေတံဆိပ်
WPC ကြမ်းပြင်စကိတ်ဘုတ်များသည်သစ်သားပလတ်စတစ်ဖွဲ့စည်းမှုများ၊ ၀ ါးပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများ၊ PVC film, PP film, နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိသော၊ ပြီးတော့ဒါကသဘာဝသစ်သား၊ ရေစိုခံနဲ့တူတယ်၊မီးဘေးကာကွယ်ရေး， မလွယ်ကူပါကပုံပျက်သော၊ ချေးခြင်းကိုခုခံနိုင်သည်， ဖျက်ချခြင်းမရှိခြင်းနှင့်ကြာရှည်ခံခြင်းမရှိဘဲပွတ်တိုက်ရန်လွယ်ကူသည်။
Skirting ဘုတ်အဖွဲ့အသုံးပြုမှု / လျှောက်လွှာ
(၁) အိမ်သူအိမ်သားအဆင်တန်ဆာ - လွတ်လပ်သောအိမ်ရေချိုးခန်းသို့မဟုတ်မီးဖိုချောင်၏နံရံနှင့်မျက်နှာကျက်။
(၂) အများပြည်သူနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုနေရာ - အဆောက်အအုံနှင့်ခန်းမအိမ်သာ။
(၃) ဘုံရုံး - လုပ်ငန်းခွင်မျက်နှာကျက်။
(၄) ဟိုတယ်၊ စီးပွားရေးရုံး၊ ဆေးရုံ၊ ကျောင်း၊ ချက်ပြုတ်ခန်း၊
Skirting Board အင်္ဂါရပ်များ:
WPC၊ Hot Stamping Panel (သို့) လွှဲပြောင်းပုံနှိပ်ခြင်း
စိမ်းပြာရောင်၊ အနီ၊ အနက်ရောင်၊ အပြာ၊ အဝါရောင်၊ အစိမ်းရောင်စသည်တို့သို့မဟုတ်သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်လိုအပ်သည်
ဒီဇိုင်း ၂၆ ခု၊ အရောင်များနှင့်ပုံစံများ - ရာနဲ့ချီတဲ့အရောင်များ၊
ဖောက်သည် '' လိုအပ်ချက်နှုန်းအတိုင်း3မီတာ
တစ်ခုချင်းစီကိုကျုံ့ရုပ်ရှင်, PE ရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်ပုံးနှင့်အတူအစုအဝေးကို
လူကြိုက်အများဆုံးအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: 300 *9* 3000mm; 450 *9* 3000mm; 600 *9* 3000mm;
WPC နံရံဆေးသုတ်ခြင်း၊ WPC စကိတ်ဘုတ်၊ WPC မျက်နှာကျက်ခြင်း၊
PVC panel ကိုအပြီးသတ်
သာမန်ပုံနှိပ်ခြင်း၊ မြင့်မားသောတောက်ပသောပုံနှိပ်ခြင်း၊ ပုံနှိပ်ခြင်း (Hot stamping panel) သို့မဟုတ်လွှဲပြောင်းပုံနှိပ်ခြင်း၊
ရေစိုခံ၊ ကြာရှည်တည်တံ့သော၊ အက်ဆစ်ဓာတ်၊ အဖျက်တိုက်စားမှု၊ ပိုးမွှား၊ အစိုဓာတ်ထိန်းခြင်း၊
၁။ အစိမ်းရောင်၊ ကျန်းမာသန်စွမ်းသော
4. ဖက်ရှင်အစုစု, ကြော့အရသာ
5. အစိုဓာတ်ချေးခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ခြင်း
၆။ နေရာလွတ်၊ ရောင်စုံအတွေ့အကြုံကိုသိမ်းဆည်းပါ
နံရံ၌သာပထမဘုတ်ကိုသတ်မှတ်ပြီး၊ ဒုတိယဘလောက်ကို ၄၅ ဒီဂရီစောင်းသည် ဖြည့်ပါ၊ လက်သည်းအကန့်အနိမ့်အနိမ့်ကိုနှိပ်ပါ။
WPC အတွင်းပိုင်းနံရံ / မျက်နှာကျက်ဘောင် / သရဖူ / စကတ် / ထောင့်၊ ထောင့်၊ ကော်နီမှိုပုံသဏ္Newာန်သည် ၀ ါးသစ်မျှင်နှင့်အသစ်သောပလတ်စတစ်ပေါင်းစပ်ထားသောနည်းပညာအသစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ /ရိယာအတွင်းပိုင်းအလှဆင်မှုအားလုံးအတွက်ရေ၊ မီးဒဏ်ခံနိုင်မှု၊
နောက်တစ်ခု: WPC စကိတ်ကြမ်းပြင်